पाकिस्तानको विरुद्ध भ्रम छर्न भारतमा एउटैको २६५ फेक न्यूज अनलाइन – Daunne News
आज प्रचण्ड–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक
आज २०७७ फागुन १९ गते बुधबारको राशिफल
कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्धक्क भएर लगाउने स्वास्थ्यकर्मीको आग्रह
पाकिस्तानको विरुद्ध भ्रम छर्न भारतमा एउटैको २६५ फेक न्यूज अनलाइन
By Shova GC	 On मंसिर २, १४:३३
एजेन्सी । युरोपको एक सत्यतथ्य जाँच गर्ने एनजीओ ‘ईयू डिसइन्फो ल्याब’को अध्ययनले एक भारतीय नेटवर्कले ६५ देशमा २६५ ‘फेक मिडिया आउटलेट’मार्फत पाकिस्तानविरोधी प्रोपोगण्डा फैलाइरहेको पत्ता लगाएको छ ।
ती सबै ‘फेक मिडिया एकाउन्टस्’को सम्बन्ध दिल्लीको श्रीवास्ताव ग्रुपसँग जोडिएको देखिएको छ ।
श्रीवास्ताव ग्रुप अन्तर्गतको ‘अन्तराष्ट्रिय इन्स्टिीच्युट अफ नन–एलाइन्स स्टडीज’ले अघिल्लो महिना युरोपेली संघका २३ सांसदलाई कश्मिरको भ्रमण गराएको थियो । साथै उसैले ती सांसद र नरेन्द्र मोदीको भेटघाटको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएको थियो ।
युरोपेली संघले रुसबाट फैलिरहेको फेक न्युजको अध्ययनको लागि एक फोरम बनेको छ । यो स्वतन्त्र सत्यतथ्य जाँच गर्ने (फ्याक्ट चेक सस्था) युरोपमा फेक प्रापेगेण्डाको पहिचान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
सोही अध्ययनको क्रममा यी २६५ फेक समाचार दिने आउटलेटहरु पहिचान गरिएको थियो । यी सबै २६५ आउटलेटमा प्रकाशित अधिकांश विषयवस्तु पाकिस्तान विरोधी समाचारले भरिएको छ ।
डिसइन्फो ल्याबको गहिरो जाँचबाट दिल्लीको श्रीवास्ताव ग्रुप र विदेशमा चलिरहेको ‘फेक लोकल न्युज आउटलेट’ सम्बन्ध देखाएको छ ।
डिसइन्फो ल्याबले अध्ययनका क्रममा कयैन मानिसले रुसबाट आइरहेको झुटो समाचारलाई ईपीटुडे वेबसाइटमार्फत शेयर गरिरहेको पाएको थियो । त्यसपछि ल्याबले यो वेबसाइटको जाँच सुर गर्‍यो ।
जाँचमा एक पछि अर्को विदेशी वेबसाइट उजागर हुँदै गए जसमध्ये अधिकांशको सम्बन्ध दिल्लीको श्रीवास्तव समूहसँग जोडिएको पाइएको थियो ।
यो सम्पूर्ण मुद्धामा श्रीवास्ताव समूहको धारणा जान्नको लागि बीबीसी हिन्दीका रिपोर्टरहरु वेबसाइटमा दिइएको ठेगाना ए२/५९ सफदरगंग पुगे । त्यस ठेगानामा रिपोर्टरले एक घर त पाए जहाँ गेटमा उभिएका सुरक्षागार्डले तिनलाई भित्र जानबाट रोके ।
गार्डले त्यहाँ कुनै कार्यालय नभएको बताए । त्यस्तै वेबसाइटमा कुनै इमेल आइडी पनि दिइएको छैन । वेबमा दिइएको फोन नम्बरमा फोन गर्दा पनि ‘तपाईंको फोन भोलि मात्र उठाउनेछौँ’ भन्ने जवाफ आइरहेको थियो ।
यो मुद्दामा बीबीसीको समूहले विदेश मन्त्रालयलाई एक मेलमार्फत यस्ता वेबसाइट्सको जानकारी मन्त्रालयसँग रहेको नरहेको र भारत सरकारको त्योसँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध भए नभएको प्रश्न गर्‍यो । तर मन्त्रालयले कुनै जवाफ दिएन ।
श्रीवास्ताव समूहसँग कसरी जोडियो वेबसाइट ?
अक्टोबर ९ मा डिसइन्फो ल्याबले अध्ययनमार्फत हासिल गरेको जानकारीलाइ लगातार ट्वीटरमा सार्वजनिक गर्‍यो । तिनले फेक एकाउन्ट र श्रीवास्तव ग्रुपबीचको सम्बन्ध औल्याउँछ ।
इपी–टुडेको औपचारिक वेबसाइटमा यसको ठेगाना ब्रसेल्स, बेल्जियमको दिइएको छ । त्यसपछि श्रीवास्ताव समूहको आधिकारिक वेबसाइट हेरियो । यो समूहको मुख्यालय दिल्लीमा रहेको र अन्य कार्यालय बेल्जियम, स्वीट्जरल्याण्ड र क्यानडामा रहेको उल्लेख छ ।
रोचक कुरा, इपी–टुडे र श्रीवास्ताव समूहको बेल्जियमस्थित कार्यालयको ठेगाना एउटै छ ।
डिसइन्फो ल्याबको भनाइमा ईपी टुडेको आईपी हिस्ट्री सच गर्दा त्यसलाई सोही सर्वरमा होस्ट गरिएको थियो जसमा श्रीवास्ताव ग्रुपलाई होस्ट गरिएको थियो । अर्थात पहिले दुवै वेबसाइटलाई एक सर्वरमा होस्ट गरिएको थियो ।
–यो वर्ष अक्टोबरमा आएको एक रिपोर्टमा बताइए अनुसार ईपीटुडेको फेसबुक पेजलाई दिल्लीबाट चार जनाले चलाइरहेका थिए । बीबीसीले यसको जाँच गर्दा यसको फेसबुक पेज सस्पेण्ड गरिसकिएको थियो ।
–यो भारतीय समूह जेनेभामा पनि काम गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको शरणार्थी एजेन्सी रहेको सहर हो जेनेभा । टाइम्स अफ जेनेभा डट कम नामबाट एक अनलाइन पत्रिका चलाइएको छ । वेबसाइटमा दिइएको जानकारी अनुसार पेजका एडमीनहरु ‘३५ वर्षदेखि यस व्यवसायमा छन् ।’
टाइम्स अफ जेनेभामा इपीटुडेमा प्रकाशित समाचार नै प्रकाशित देखिन्छ । टाइम्स अफ जेनेवाको साइटमा रहेका जति पनि भिडियो छन् ती सबैमा पाकिस्तानका अल्पसंख्यक र गिलगित–बल्तिस्तान क्षेत्रको कुरा गरिएको छ । टाइम्स अफ जेनेभामा पाकिस्तानी अल्पसंख्यकहरुको प्रदर्शनलाई धेरै नै कभर गरिएको छ ।
डिसइन्फो ल्याबको दावी अनुसार टाइम्स अफ जेनेभाको सर्भरमा एक एनजीओको वेबसाइट ‘पाकिस्तानी वुमेन डट कम’ पनि चलिरहेको छ ।
ल्याबको अनुसन्धानका क्रममा वेबसाइट हुदैं युरोपेली अर्गनाइजेशन फर पाकिस्तानी माइनोरिटी(ईओपीएम)को ट्वीटर ह्याण्डलसम्म पुग्यो । यो संस्थाको ठेगाना, ईपीटुड र श्रीवास्ताव ग्रुपको ब्रसेल्स कार्यालयको ठेगाना एउटै छ ।
यस मुद्दामा तेस्रो खेलाडी पनि छ, ४न्युजएजेन्सी । यो वेबसाइटमा दिइएको जानकारी अनुसार यो बेल्जियम, स्जिट्रल्याण्ड, थाइल्याण्ड र अबू धाबीको चार समचार एजेन्सीहरुको एक समूह हो । तथापि यो चार एजेन्सी कुन कुन हो बताइएको छैन ।
वेबसाइटमा उसको टीमले सय देशमा कम गरिरहेको बताइएको छ तर वेबसाइटमा बेल्जियम र जेनेवाको दुई कार्यालयको मात्र ठेगाना दिइएको छ । रोचक पक्ष, ईपीटुडे, जेनेवा टाइम्स, ४न्युजएजेन्सी र श्रीवास्तव ग्रुप सबैको कार्यालय बेल्जियम र जेनेभामा नै छ ।
४न्युजएजेन्सी, इपीटुडे, जेनेवा टाइम्स र श्रीवास्ताव ग्रुपबीच लिङ्कको विस्तारमा बुझ्नको लागि बीबीसीले डिसइन्फो ल्याबलाई मेल गर्‍यो । त्यसको जवाफमा थाहा पाइन्छ कि यो सबै फेक मिडिया आउटलेट यो एजेन्सीसँग जोडिएको छ । यी बेवसाइटमा एकै खालको सामाग्रीको प्रयोग भइरहेको छ ।
डिसइन्फो ल्याबको भनाई अनुसार २१ यस्ता डोमेन चलिरहेका छन् जो एउटै सर्वरबाट चलिरहेको छ र यसमा श्रीवास्ताव ग्रुपको नाम समावेश छ ।
डिसइन्फो ल्यावले २०१८मा लेखिएको एक पत्र प्राप्त गरेको छ । माडी शर्माकै गैर–सरकारी संगठन ‘डब्लूईएसटीटी’ले यूरोपेली संसदका पूर्व अध्यक्ष एन्टोनिया ताजानीलाई पत्र लेखेर पाकिस्तानी अल्पसंख्यकबारे इपी–टुडेमा छापिएको अप–एडलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको छ । माडी शर्माको यही संगठनले २३ युरोपेली संघका सांसदहरुको भारत भ्रमण आयोजना गरेको थियो ।
बीबीसीले आफ्नो जाँचको क्रममा माडी शर्माले ईपीटुडेमा लेख लेख्ने गरेको पायो ।
एउटै नामको व्यक्ति ईपीटुडेमा लेख पनि लेखिरहेका छन् र माडी शर्माको थिंक ट्याकं ‘डब्लूईएसटीटी’को लागि काम पनि गरिरहेको देखिन्छ ।
यो वेबसाइट के काम गर्छ ?
डिसइन्फो ल्याबको दावी अनुसार ‘२६५ फेक लोकल न्यूज आउटलेट’ले अन्तराष्ट्रिय सस्थाहरुलाई प्रभावित गर्ने काम गर्छ ।
आफ्नो विश्वसनीयतालाई बलियो पार्नको लागि एनजीओलाई खास प्रकारको विरोध प्रदर्शनहरुबारे पत्रकार जानकारी गराउँछ ।
यो सबै मिडिया आउटलेट एक अर्कोलाई कोट गर्छन् । एउटै रिपोर्टलाई आफ्नो प्लाटफर्ममा छाप्छन् । पढ्नेले समाचारमा रहेको भिन्नतालाई नबुझुन् भनेर यसो गरिन्छ ।
यसको उदेशय भारतको लागि अन्तराष्ट्रिय समर्थन बढाउनु तथा समचार र सम्पदाकीयद्वारा मानिसबीच पाकिस्तानलाई छवि तोड मरोड पेश गर्नु देखिन्छ ।
के हो श्रीवास्तव ग्रुप ?
श्रीवास्ताव ग्रुप यो वर्ष अक्टोबरमा तब समाचारमा छाएको थियो जब उसले २३ युरोपेली संघका सांसदलाइ कश्मीरको भ्रमणका लागि भारत ल्यायो ।
माडी शर्माको एनजीओ ‘विमेन्स इकोनोमिक एण्ड सोशल थिंक टैंक (डब्लूईएसटीटी)’ले युरोपेली सांसदलाई भारत लिएर आएको थियो । सांसदलाई पठाइएको निमन्त्रणामा तिनको आउजाउको खर्च भारतस्थित ‘इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट अफ नन–अलाइड स्टडीज(आईआईएनएस)’ले तिर्ने उल्लेख थियो ।
‘इन्स्टिीच्युट अफ नन अलाइड स्टडीज’ गैर–सरकार संगठन हो जसको स्थापना सन् १९८० मा भएको थियो ।
श्रीवास्ताव ग्रुपको वेबसाइटमा बताइएका अनुसार आईआईएनएस उसैको एक संस्था हो । यसको अतिरिक्त यो समूहले केही पत्रिकाहरु डेल्ही टाइम्स(अंग्रेजी), नयाँ दिल्ली टाइम्स(हिन्दी) पनि छाप्छ ।
तथापि ती पत्रिको सर्कुलेशन कति छ भन्ने कुराको कुनै जानकारी वेबसाइटमा दिइएको छैन ।
द वायरमा आएको समाचार अनुसार श्रीवास्ताव ग्रुपका कयैन कम्पनी छन् तर रजिस्ट्रार अफ कम्पनीमा पेस गरिएको कागजात हेर्दा तिनको व्यवसाय देखिँदैन । तीसँग पर्याप्त पैसा पनि देखिँदैन ।
यो समूहका कुल सात कम्पनी चलिरहेको छ । ती सबै कम्पनीको बोर्डमा नेहा श्रीवास्ताव र अंकित श्रीवास्तावको नाम छ ।
रिपोर्ट अनुसार एटूएन ब्रोडकास्टिङले अघिल्लो वर्ष २००० भारुको घाटा बेहोर्‍यो । यो कम्पनीको कुनै कमाई छैन र योसँग १० हजार भारुको बचत सिटी बैङ्कमा छ र १० हजार भारु ओरियन्टल बैङ्कमा छ ।
यो कम्पनीसँग त्यस्तो ठूलो नाफामुलक व्यवसाय देखिँदैन ।
सफदरजंग एन्क्लेभमा ए२/५९ ठेगाना बीबीसीको टीमले खोज गर्दा सन् २०१८ को इण्डियन इस्लामिक कल्चर सेन्टरको एक इलेक्टोरल लिस्ट प्राप्त भयो । यस अनुसार यो ठेगानामा अंकित श्रीवास्ताव र नेहा श्रीवास्ताव रहन्छन् ।
यो दुवै श्रीवास्तव समूहसँग जोडिएका छन् । डा. अंकित श्रीवास्तव यो समूहको उपाध्यक्ष हुन् । उता नेहा श्रीवास्ताव पनि उपाध्यक्ष छन् । तर यो ठेगानामा एक कार्यालय रहेको दावी गरिन्छ ।
त्यसपछि बीबीसीको टिमले यसको समाजिक सञ्जाल एकाउन्टको खोजको क्रममा अंकित श्रीवास्तावको ट्वीटर प्रोफाइल प्राप्त गर्‍यो । यस प्रोफाइलमा १० हजारभन्दा बढी फलोअर छन् र उनले आफलाई ‘न्यू डेल्ही टाइम्स’का प्रधानसम्पादक बताएका छन् । अंकित श्रीवास्तवको लिङ्क्डइन प्रोफाइलमा पनि यही जानकारी दिइएको छ ।
कयैन कोसिसपछि पनि श्रीवास्तव समूहका कुनै पनि प्रतिनिधि बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्न तयार भएनन् ।
टिकटकबाट चिनजान : होटलमा २ दिन सँगै बसेपछि लुटपाट
फाल्गुन १९, ०५:५४
बंगलादेश अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’…
फाल्गुन १९, ०५:४७
फाल्गुन १९, ०५:४०
फाल्गुन १८, २२:१३
कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्धक्क भएर लगाउने…
फाल्गुन १८, २१:२१